Ukukhiqizwa Kwe-Smart - I-Ningbo Runner Co., Ltd.
UHLELO LOKUKHIQIZA RUNNER
Ngokuya kokucubungula impahla, izinsimbi zensimbi zokuphonsa nokufaka isitampu, ukwelashwa kwendawo, ukuhlangana nokupakisha, iNINGBO RUNNER izuze ukuzisebenzisela okuphezulu futhi yakha ukwakheka okugcwele kwenqubo. Ngokumboza isixhumanisi ngasinye seziphakamiso zokwenza ngcono, imisebenzi yokwenziwa ngcono ye-RIT (Runner Improve Team) nemisebenzi yangaphakathi noma yezinkampani ezinkulu, yakhe uhlelo lwayo lokuphatha i-Runner Production System (RPS) enezici ze-RUNNER futhi umgomo "wokusebenza kahle okuphezulu, ikhwalithi ephezulu kanye nokukhalipha" ngokusebenzisa inqubo nokwenza ushintsho oluhlakaniphile.
01 UKWAKHA ISITATIMENDE
ININGBO RUNNER izibophezele ekucwaningeni ngemishini yokubumba epulasitiki kanye nolawulo lwenqubo. Inikeza izixazululo ezizimele zokwakhiwa kwesikhunta, ubuchwepheshe bokufa nokwenziwa kobuso kanye nokukhiqizwa okugcwele okuzenzakalelayo kwemishini yesandla sesithathu (amalogo, ama-sprayers kanye ne-extractors), ukukhiqizwa okuqhubekayo kweziteshi eziningi nokukhiqizwa okuqhubekayo okungahambelani, ukufeza okungenamuntu nokuzenzakalelayo ukusebenza ngokuyisisekelo futhi kusondele kwimodi yokukhiqiza yesigaba sezimboni 3.0.
02 UKWELASHWA KOBUSO
Ingakwazi ukubona i-batch encane, ukwehluka nokukhiqiza ngobuningi ngasikhathi sinye.
Ubuso bokunamathela bunokuphepha okuhle, umbala ozinzile, ohlala isikhathi eside, ama-antibacterial, anti-staining nokuhlanza kalula, anti-zeminwe neminye imisebenzi. Le nkampani ingabona ukukhiqizwa kokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza, futhi amanzi angcolile asondele ekushayweni kwe-zero.
03 ISIKHUNGO SOKUZENZA NGOKUPHAKATHI NOMHLANGANO
ININGBO RUNNER inendawo yokuhlangana engenazintuli futhi isebenzisa imishini ethuthukile ezenzakalelayo ne-semi-othomathikhi ukupakisha nokuhlangana ukuze ibone inhlanganisela ephumelelayo yabasebenzi nemishini. Khonamanjalo, uWeilin uyakwazi ukwakha amathuluzi nezinsizakusebenza futhi ahlanganise i-R & D, ukuklama, ukukhiqiza, ukuhlangana nokuhlolwa kwamathuluzi nezinsimbi kokukodwa.
Ucwaningo oluzimele nokuthuthukiswa kwezinto eziluhlaza
Ucwaningo Independent nokuthuthukiswa ezihlakaniphile udini ubuchwepheshe
Ucwaningo oluzimele nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokwelashwa kwendawo eluhlaza